Breaking news . Oduu Ammee: Akkeekachisaa Qeerroo Amboo irraa keenyamee! | Kichuu
Posted on January 7, 2019 by kichuu_admin
Breaking news : Oduu Ammee:
#Amboo-Qeerroon ulee bilisummaa malee, ulee gabrummaa hin baatu!
“Ololli diina keenyaa sodaa ABO/WBO irraa qaban irraa madda. ABO/WBOn kaayyoo ifaa qabna: Bilisummaa Oromoo- Diinonni keenya, diinota kaayyoo keenyaa ti. Diinonni keenay kun amma olola naannoo AMbootti gaggeessa jirtu keessaa tokko ‘WBOn Adda bilisa baasaa wallaggaa kan Geetachoo Asaffaa ti malee adda bilisa baasaa oromoo miti,’ jettee sobaa afarsaa jirti; opdo fi G-7 warreen jibba oromoo qabanis gargaaranii afarsaafii jiru.
Ijoollee hidhaa wayyaanee jala turan, maatiin jala wareegaman, Miidhaan adda addaa mootummaa wayyaneen irra gahaa turee dha.Yaroo ammaa kana yaadota tokkummaa oromoo adda qoodu irratti hojjetaa jiru. Oromoonni hubannoo hin qabnes deebi’anii of abaaraa oolu.
Kabinnoonni opdo fi maatii isanis kan walharkaa fudhee olola sodaa fi jibba ABO qaban xureessuuf cilattii dibaa oolu.
Dhaabni cimaan EPRDF dabalatee oromoo phobia warreen qaban waggoota 27 tiif itti duulanii balleessu hin dandeenye. ABOn laphee fi dhiiga oromoo keessa kan jiru dha malee dhaba qofa miti. Oromoon wallaggaa qofa jiraayyuu ? Jechaa jiru. WBO Shaggar ,Boorana,Gujii kkf jiranoo WBO mitii ?
Makkalakaayaan WBO Aanaa Jalduu jiru barbaacha deemaa ture; WBO achi jiruun daraa botoroo ta’aa jirti.Ummanni aja’iiba jechaa jira Gootummaa fi dandeetti WBO.
Warreen otoo hin beekiin Warreen oromoo qoqqoodanii umna fi Tokkummaa oromoo diiguuf olola diinaa hafrsaa oolan dura dhaabbachuun harkaa fashaleessuun Dirqama qabsa’oota dhugaa kan bilisummaaf qabsa’aanii ta’uu qaba.Qeerron yoomiyyuu ulee bilisummaa malee, ulee gabrummaa hin baatu!
Sagalee Qeerroo bilisummaa Amboo !!”
2 thoughts on “Breaking news . Oduu Ammee: Akkeekachisaa Qeerroo Amboo irraa keenyamee!”
Sorsa on January 7, 2019 at 11:39 am said:
OPDOn waan abbaan ishii Mallas Zenawi ishii barsiisee hojjechaa jirti. Qerroo fi ummaanni oromo akkumaa mootummaa ilma Mallas, Hailamariam, of irraa fonqolcheti mootummaa ilma Mallas, Abyyis, ofi irraa fonqolchuu malee carraa biraa hnqabu. OPDO kana booda hammam maqaa haajijiirratu malee Oromia bulchuu hindandeessu.
Jigsaa on January 7, 2019 at 4:02 pm said:
Ani qallicha Abiy jedhamu kana jalqabumarrtti Kanan jibbee waan lamarraa ka’een: 1ffaa gaafa inni haadhasaa amaartittii dhadhesse jalala isheef qabu ibsee abbaa isaa ammoo maqaadhuma isaa illee kaasuu lagate. 2ffaa gaafa inni Eritriatti imalee araaraf Isayaasiin milatti kufee kadhate. Kan inni kana godheef rakkoo dangaa hiikuuf osoo hin ta’in dahoo Isaayaas ABOf godhuu irraa kutuuf kan kayyeffate ture. Abiy, diqaalaa Habashaa irraa dhalatee Habashaa fuudhee jibbiinsa sabboonummaa oromootiin summaayyee waan ta’eef diina Oromoo isa jalqabaa ta’ee as bahe. Kanaaf har’a G7 fi Dawit w/Giyorgis daboo kadhatee duguuggaa sangnii oromoorratti raawwachaa jira. Kanaafuu oromiyaa cicciree Somalleef, Afaariif, Beenishangullif, Amaaraaf, Tigreef kennuun biyya oromiyaa jedhamtu dhabamsiisu, sabboonta bilisummaafi qabsa’an guutummaatti fixuu. Hawwala sabbontotaa irrattimoo impaayera Minilik durii gadii dhaabuudha kaayyoon Abiyifi fakkatootasaa. Kanaafuu olola gantuufi galtiuutiin otuu hin burjaja’in tokkummaan dura dhaabbachuun dirqama oromummaa ta’u qaban jedha.